Baarlamaanka oo kulan Xasaasi ah Maanta Muqdisho ku yeeshay+Sawirro |
Baarlamaanka oo kulan Xasaasi ah Maanta Muqdisho ku yeeshay+Sawirro
Mudanayaasha Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa maanta ka dooday dib u soo celinta Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya.
Baarlamaanka ayaa waxaa hor yimid Guddoomiyaha Hay’adda Qaxootiga Qaranka Axmed Cabdi Kariin oo su’aalo laga weydiiyay arrimaha la xiriira Qaxootiga Soomaaliyeed ee ku nool waddanka Kenya.
Xildhibaanada qaar ayaa sheegay in qaxooti aad u badan oo Soomaali ah ay ku kala firirsan yihiin Daafaha dunida , iyagoo tusaalo u soo qaatay Dalka Koofurta Suudaan oo iminka dagaalo ay ka jiraan , waxaana ay ku baaqeen in Soomaalida halkaasi degan laga soo daad gureeyo sababo ammaankooda oo Qatar ku jira.
Guddoomiyaha Hay’adda Qaxootiga Qaranka oo weli sugaya Codka Kalsoonida Baarlamaanka ayaa waxaa wax laga weydiiyay waxqabadkiisa haddii Baarlamaanka uu ka helo Codka Kalsoonida.
“ si wanaagsan ayaan u maareyn doonaa Howlaha Hay’adda , waxaana dib u dajin u sameyn doonnaa qaxootiga Soomaaliyeed ee ku kala firirsan daafaha Caalamka” sidaasi waxaa yiri Axmed Cabdi Kariin Guddoomiyaha Qaxootiga Qaranka.
Sidoo kale Baarlamaanka maanta waxaa horyimid Guddoomiyaha Hay’adda diraasaadka Badaha Admiraal Faarax Qare kaas oo faah faahin Baarlamaanka ka siiyay qaabka ay Hay’addaasi u shaqeyneyso isagoona ka codsaday Baarlamaanka in ay meel mariyaan Hay’addaasi.
Admiraal Faarax Qare ayaa Xildhibaanadu waxa ay hor dhigeen su’aalo dhowr ah oo ay ka mid tahay in biyaha Soomaaliya dhibaatooyin aad u ballaaran ay ka taagan tahay isagoo carabka ku adkeeyay in ay ku tala jiraan in ay wax ka qabtaan.
Isagoo hadalkiisa sii wato ayaa Faarax Qare waxa uu shaaca ka qaaday in Muhiimadda hay’addaan loo sameeyay ay tahay in badda Soomaaliya oo muran uu ka taagan yahay la xadeeyo.
Kulanka Maanta Baarlamaanku ku yeeshay Golaha Shacabka Muqdisho ayaa waxaa soo xaadiray 188 Mudane kuwaas oo ka dooday labada ajande ee aanu kor ku soo xusnay.